December 5, 2008 @ 11:42 am Reply	ဒီလိုပါပဲ ညီမလေးရေ ။ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ငွေကြေးဆုံးရှုံးတာထက် ကိုယ် ထားခဲ့ဖူးတဲ့ စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းလေး မဆုံးရှုံးစေချင်ဘူး ။ ခုလို ပျော်ရွှင်ရမဲ့ အချိန်လေးတွေမှာ ကျန်တာတွေ မေ့ထားလိုက်ပေါ့ ။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲလေးအကြောင်းကို ဖတ်ရှု ဝမ်းမြောက်ဖို့ မျှော်နေမယ်ဗျာ။ ဒါနဲ့ ခုလို ပွဲရက်နားနီးရင် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေ ကြုံတတ်တာ သဘာဝပဲ ညီမလေးရဲ့ ။ အဓိက ကတော့ ၂ ယောက်စလုံး ကျန်းမာရေးတော့ ဂရုစိုက်ကွ ။ အိပ်ရေးတောင် အပျက်မခံကြနဲ့ ။ ဒါမှ ပွဲနေ့မှာ လန်းမှာပေါ့ နော့။
December 5, 2008 @ 12:24 pm Reply	မလင်းလက်…..
February 14, 2009 @ 12:43 pm Reply	my sisrte u din’t mind now she already gone . if u mind him u also no happy u life .i want to talk with myammar language but i no have myanmar font . i want to say more but my english is no good so stpo here .GOD BLESS U .byeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Comment by myint oo
April 17, 2009 @ 9:44 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI